Soo-saareyaasha Kaararka - Shirkadaha Kaararka Shiinaha & Warshad
Kaarka ganacsiga maskaxda wuxuu ka samaysan yahay 100% nooc cusub oo PVC ah wuxuuna raacayaa heerka caalamiga ah ee ISO 7816 ama markab ama qaab loo habeeyay.
Kaarka Mind Barcode waxaa badanaa laga sameeyaa 100% nooc cusub oo PVC ah wuxuuna raacayaa heerka caalamiga ah ee ISO 7816. Barcode, QR code waa la habeyn karaa waxaana bixinaa fursado badan oo shaqsiyeed.
Kaarka hufan ee maskaxda, kaarka ganacsiga cad, kaarka barafoobay wuxuu ka kooban yahay 100% nooc cusub oo PVC ah wuxuuna raacayaa heerka caalamiga ah ee ISO 78116. Sidoo kale waa la beddeli karaa cabbirka iyo dhumucda.
Aagga xoqida iyo tirada xoqida iyo midabka xoqida / diecut ayaa wax laga beddeli karaa. Waxaan bixinaa ikhtiyaarro shaqsiyadeed oo badan.